मधेशमा राउत र ज्ञानेन्द्रको आगमनले कहाँ गर्ला असर ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » मधेशमा राउत र ज्ञानेन्द्रको आगमनले कहाँ गर्ला असर ?
मधेशमा राउत र ज्ञानेन्द्रको आगमनले कहाँ गर्ला असर ?
SAHARA TIMES Sunday, March 17, 20190No comments
काठमाडौ चैत ३–विगत १२ दिनमा मधेशमा तीन घटना भयो जसले मधेशको मात्र होइन, पुरै देशलाई हलाई दिएको छ ।
फागुन महिनामा मात्र भएको यी तीन घटनाले मधेशको राजनीतिक मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीतिकलाई पनि प्रभाव पारेको छ । कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले आजिवान कारावासको सजाय सुनायो । त्यो घटनाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो ।
त्यसको ठिक दुई दिनपछि अर्थात २४ गते सिके राउत संयोजक रहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकारबीच ११ बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताले सत्तारुढ दलमा नै विवाद ल्याई दिएको छ । सिके राउतले ११ बुँदे सम्झौता गरि फागुन २६ गते मधेश फर्केको तीन दिनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि मधेश झरे । सर्लाही र जनकपुरमा पुजा पाठ गरि गाईघाट हुँदै आज सप्तरी पुगेका छन् । सखडा भगवतीको दर्शन गर्न पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको यो मधेश भ्रमणलाई निकै रणनीतिक ढंगमा लिएको छ ।
मधेशको यी तीन घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पाएको छ । तर यी तीन घटनाले मधेशको राजनीतिकमा खासै असर नपार्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । रेशम चौधरीको आजिवन जेलले राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि त्यसको असर मधेशमा खासै परेको छैन । रेशम चौधरीलाई आजिवन जेल हुँदा पश्चिम मधेशमा केही विरोध भएपनि पूर्वी मधेशमा खासै विरोध भएन । राजपा नेपालले पनि खासै विरोधका कार्यक्रम गरेनन् ।
सिके राउत काठमाडौबाट मधेश झरेको दिन मात्र चर्चा भयो, त्यसपछि कुनै चर्चा छैन । फागुन २६ गते जनकपुर एयरपोर्टमा सिके राउतका कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शनको निकै आलोचना भयो । त्यसपछि राउतका कार्यकर्ताले कुनै कार्यक्रमका आयोजना गरेनन् । आज सिरहाको लहानमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएको छ ।
सिके राउत मुलधारको राजनीतिमा आएपछि सबभन्दा बढी चुनौति राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई हुने धेरैले आँकलन गरेको छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा र फोरमलाई तह लगाउनका लागि सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको भनि टिप्पणी गरेका छन् । तर तराई मधेशको गाउँ देहात घुमिरहने पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, मुलधारको राजनीतिकमा राउतको आगमनले मधेशमा तत्कालै कुनै फरक पर्दैनन् किनभने उहाँसँग अहिले कुनै एजेण्डा छैनन् ।’
छुट्टै देशको एजेण्डा लिएर राजनीतिकमा भएको कारणले उनको पछि केही युवा लागेका थिए थिए तर अब मुलधारको राजनीतिकमा आइसकेपछि राजपा, फोरम वा अन्य दलभन्दा के फरक दिनसक्छ त्यसमा भरपर्छ, चन्द्रकिशोरले भने, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायतको एजेण्डामा राउतले के भन्नुहुन्छ, त्यसमा भरपर्छ ।
राष्ट्रियसभा गृहमा त्यत्रो मञ्च पाउँदा संघीयता, राज्यपुनसंरचना, समावेशी, सविधान संशोधन लगायतको विषयमा केही नबोलेका राउतले आउने दिनमा केही फरक देल भन्ने कुराको विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने राउतका लागि मधेशमा पोल्टिक्स गर्न त्यति सजिलो छैन । मधेशमा उहाँले धेरै कुराको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हुन्छ ।’
यद्यपी ज्ञानेन्द्र र राउतको मुद्दा फरक फरक रहेको उनको टिप्पणी छ । राउत एउटा संगठन लिएर आएका छन्, उनको साथमा कार्यकर्ताहरु छन्, विचार छन् त्यसैले मधेशमा कुनै नकुनै रुपमा उनको प्रभाव रहेपनि ज्ञानेन्द्रको केही पनि नरहेन उनको दावी छ । राजा इतिहास भइसकेका हुनाले मठमन्दिरमा आएकालाई जनता हेर्न जाँदा त्यसलाई आफ्नो कार्यकर्ता वा समर्थक बुझ्नु ज्ञानेन्द्रका लागि भूल हुने उनको तर्क छ ।
यस्तै तर्क छ, प्रध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभको तर्क पनि त्यस्तै छ । जनकपुरका प्रध्यापक लाभ भन्छन्, सिके राउत र ज्ञानेन्द्रको मधेश भ्रमणले कुनै फरक पर्ने छैन । ज्ञानेन्द्र शाह मधेशको मनोविज्ञान मापन गर्न आएपनि उहाँलाई केही हात लाग्नेछैन ।’ ज्ञानेन्द्रले आशा गरेका छन् तर उनको सत्ता फर्केर आउने कुनै सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन् । ज्ञानेन्द्र र राउत दुईटै टेस्ट भइसकेका छन् । ज्ञानेन्द्र शासन पनि जनताले हेरिसकेका छन् भने राउतको राजनीतिक जनताले थाह पाइसकेका छन् त्यसलैले उनीहरुले चाहदैमा जनताले साथ नदिने उनको विश्लेषण छ ।
वर्तमान सरकारबाट जनता असन्तुष्ट छन्, भ्रष्टाचारबाट जनता आजित भइसकेका छन्, ती फ्रस्टेशनले यसको केही लाभ लिने कि आश उनीहरुमा छन् तर त्यसले केही प्राप्त नहुने बताउँदै प्रध्यापक लाभले भने, असन्तुष्ट भएका कारण जनता अलमलमा पर्न सक्छ तर न जनता विप्लवका साथमा जान्छन्, नज्ञानेन्द्र न राउतका साथमा जान्छन् ।’
यद्यपी राउतले संगठनको बैठक बोलाएको छ भोलीसम्म उनको बैठक चल्छ । बैठकबाट उनले के निर्णय लिन्छन् त्यसमा भर पर्छ तर फोरम नेपाल र राजपा नेपालले उठाएका मुद्दा भन्दा केही फरक उठाउँछन भने कुरामा कसैले विश्वास गर्दैनन् । राजपा नेपालका महासचिव एवं प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, सिके राउतले ओलीसमक्ष आत्मसर्पण गरिसक्नु भएको छ । र आत्मसर्पण गरेका व्यक्ति पुनः राजनीतिमा कुन मुख लिएर कुन एजेण्डाले आउँनुहुन्छ, पहिला उहाँले मधेशमा जे गर्नुभयो, जसरी जनतालाई भ्रममा राख्नुभयो, मधेशमा उहाँको कारणले जेजति क्षति भयो ती सबैको हिसाब दिनुपर्छ ।’
मन्त्री सोनलले राउत राज्यबाट परिचालित व्यक्ति हुन जसबाट मधेशले कुनै आशा गर्न नसकिने दावी गरे ।
यो कुरासँग वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापडी पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, घरमा बसेर राजनीतिक हुँदैनन् । काठमाडौबाट फर्केपछि राउत घर बाहिर निस्केका छैनन् ।’
यत्रो आन्दोलन गरेर स्थापित भएका पार्टीहरुले केही गर्न सकेन भने राउत फरक विचार, फरक स्कूलिङबाट आएका हुनाले मधेशमा केही गर्न सकिनेमा विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए । यद्यपी अझै समय बाँकी छ । राउतले बैठक बोलाएका छन्, त्यो बैठकले केही नयाँ सोच, नयाँ एजेण्डा ल्यायो भने कही हुनसक्छ नभए अहिलेको शैलीले राउतको जादु मधेशमा चल्ने सम्भावना आफू नदेखेको बताए ।
सिके राउत जस्तै ज्ञानेन्द्रको जादु पनि यहाँ नचल्ने उनको दावी छ । धर्मको नाममा जनताको मन जित्ने सोच लिएर मधेश आएका ज्ञानेन्द्रलाई केही हात नलाग्ने उनले बताए । अन्य ठाउँ भन्दा मधेशमा हिन्दु धर्म मान्नेहरु धेरै छन् त्यही भएर मधेशतिर ज्ञानेन्द्र शाहको ध्यान गएको बताउँदै उनले मठमन्दिरको दर्शन गरेर राजनीतिकमा कुनै फरक नपर्ने कापडीको दावी छ ।
राउत मुलधारको राजनीतिमा आएपछि उनको लागि चुनौतिको चाँङ्ग छ । पहिला त उनीसँग अलग मधेशको एउटा मात्र एजेण्डा थियो । छुट्टै देश बनाएपछि के गर्नुपर्छ गरौला भनि कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउँथे उनी तर अब उनले राज्य पुनः संरचना कस्तो हुने, समावेशीको के गर्ने, सविधान संशोधन के केमा गर्ने लगायतको हरेक कुरालाई स्पष्ट पर्नुपर्छ । र, स्पष्ट पार्दा फोरम र राजपा भन्दा फरक भएन भने जनता उनीप्रति आकर्षण नहुने चन्द्रकिशोरको दावी छ ।
स्रोतः रातोपाटी अनलाइन